कार्ल मार्क्सको द्वीशतवार्षिकी – सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
कार्ल मार्क्स ५ मई, १८१८ मा जर्मनीमा जन्मनु भएको थियो । १४ मार्च, १८८३ मा उहाँको देहावसान भयो । आज मार्क्स जन्मेको दुईसय वर्ष पूरा भइसकेको छ र विश्वभर मार्क्सको द्विशतवार्षिकी मनाउने काम भएको छ । मार्क्स विश्व सर्वहारावर्ग र उत्पीडित जनसमुदायका महान् नेता हुनुहुन्थ्यो । जर्मनीवासी एङ्गेल्स (१८२०–१८९५) को सहयोगमा मार्क्सले मार्क्सवादको निर्माण गर्नुभयो । मार्क्सवाद ऐतिहासिक आवश्यकताअनुसार विश्व सर्वहारा वर्ग र सिङ्गो मानव जातिकै मुक्तिको लागि जन्मिएको थियो । मार्क्सवादको औचित्य र सान्दर्भिकता अहिले पनि उत्तिकै छ ।
बाह्य रूपमा विभिन्न प्रतिक्रियावादी, पुँजीवादी र साम्राज्यवादीहरूले मार्क्सवादमाथि भीषण हमला गर्दै आएका छन् । दुश्मनहरूले आन्तरिक रूपमा पनि मार्क्सवादमाथि हमला बोले र त्यसै क्रममा मार्क्सवादको आन्तरिक दुस्मनका रूपमा संशोधनवाद जन्मियो । मार्क्सवाद बाह्य र आन्तरिक दुवै प्रकारका दुश्मनका विरुद्ध संघर्ष गर्दै अगाडि बढ्यो र त्यो मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवादका रूपमा विकसित हुन पुग्यो । मार्क्सवाद मानवीय श्रमशक्ति, प्रकृति विज्ञान र वर्गसंघर्षको धर्तीमा खडा थियो र त्यसलाई हल्लाउने तागत कसैमा थिएन ।
त्यसैले त्यो विश्व सर्वहारावर्ग र उत्पीडित मानव जातिको मुक्तिको अपराजेय सैद्धान्तिक हतियार बन्न पुग्यो । उत्पादनका निम्ति संघर्ष, वर्गसंघर्ष तथा नयाँ वैज्ञानिक आविष्कार एवम् प्राविधिक क्षेत्रमा भएका प्रगति र विश्वका विभिन्न देशहरूमा हुँदै आएका क्रान्ति तथा प्रतिक्रान्तिका परिघटनाका सन्दर्भहरूमाथि ध्यान दिंदा आज मार्क्सवादका सामु गम्भीर प्रकृतिका चुनौतीहरू थपिन पुगेका छन् । परन्तु, त्यस प्रकारका चुनौतीहरूको सामना गर्दै क्रान्तिको धरातलीय यथार्थ तथा ऐतिहासिक आवश्यकताका बीचबाट नयाँ सम्भावनाका द्वारहरू उद्घाटन गर्ने सामर्थ्य मार्क्सवादमा नै सन्निहित छ । किनभने मार्क्सवाद सामाजिक रूपान्तरण र क्रान्तिको ऐतिहासिक विज्ञान हो ।
मार्क्सवादका तीन संघटक अङ्ग
मार्क्सवादका तीन संघटक अङ्ग छन् : दर्शन, राजनीतिक अर्थशास्त्र र वैज्ञानिक समाजवाद । मार्क्सले १९ औं शताब्दीमा विकसित शास्त्रीय जर्मन दर्शन, शास्त्रीय अंग्रेजी अर्थशास्त्र तथा फ्रान्सेली समाजवादको गहन अध्ययन तथा समीक्षा गर्नुभयो र तिनलाई गुणात्मक रूपमा विकास तथा संश्लेषण गरी मार्क्सवादको प्रतिपादन गर्नुभयो ।
दर्शनको फाँटमा मार्क्सले हेगेलको द्वन्द्ववाद र फायरबाखको भौतिकवादमाथि विशेष ध्यान दिनुभयो । हेगेलले द्वन्द्ववादलाई एक उत्कर्षमा पुर्याएका थिए, तर त्यो आदर्शवादमा आधारित थियो । फायरबाखले भौतिकवादलाई धेरै माथि उठाएका थिए, तर त्यो अधिभूतवादी तथा यान्त्रिक थियो । हेगेलको द्वन्द्ववादमा विद्यमान आदर्शवाद र फायरबाखको भौतिकवादमा विद्यमान अधिभूतवाद तथा यान्त्रिकतावादका विरुद्ध जुझ्दै ती दुवैलाई एउटै ठाउँमा संश्लेषित गरी द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको प्रतिपादन गर्ने काम मार्क्सद्वारा सम्पन्न गरियो । द्वन्द्वात्मक भौतिकवादका आधारमा मानव समाजको ऐतिहासिक विकास प्रक्रियाबारे अध्ययन गर्दा जुन निष्कर्ष निस्कन्छ, त्यही नै ऐतिहासिक भौतिकवाद हो । द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादले दुनियाँ बुझ्ने मात्र होइन, मुख्यतः बदल्ने कुरामा जोड दिन्छ ।
मार्क्सले राजनीतिक अर्थशास्त्रको फाँटमा एडम स्मिथ र डेभिड रिकार्डोद्वारा विकसित मूल्यको श्रमसिद्धान्तबारे गहिरो अध्ययन गर्नुभयो र त्यसलाई अझै विकसित तथा समृद्ध तुल्याउनु भयो । मालको मूल्य निर्धारण त्यसमा लागेको सामाजिक श्रमद्वारा गरिन्छ भने मुनाफाको उत्पत्ति कसरी हुन्छ ? मार्क्सले यस प्रश्नको जबाफ अतिरिक्त मूल्यको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेर दिनुभयो । मार्क्सद्वारा विकसित समाजवाद पुराना समाजवादभन्दा पृथक वैज्ञानिक समाजवाद हो । ऐतिहासिक भौतिकवाद र अतिरिक्त मूल्यको सिद्धान्तको आविष्कारको परिणाम स्वरूप वैज्ञानिक समाजवादको जन्म भएको हो । वैज्ञानिक समाजवाद वर्ग, वर्गसंघर्ष, सामाजिक क्रान्तिमा बल प्रयोगको भूमिका, सर्वहारावर्गको अधिनायकत्व र साम्यवादको सैद्धान्तिक मान्यतामा आधारित छ ।
मार्क्सवाद भनेको मार्क्सीय विचार र शिक्षाको सार हो । मार्क्सवाद गतिशील छ र त्यो विकसित हुँदै आएको छ । मार्क्सवादलाई सर्वप्रथम लेनिन र त्यसपश्चात् माओले विकसित तुल्याउनु भयो । आज विश्व सर्वहारावर्ग र उत्पीडित जनसमुदायको मुक्तिको सिद्धान्तका रूपमा मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवादको विकास भएको छ ।
लेनिनवाद साम्राज्यवाद र सर्वहारा क्रान्तिको युगको मार्क्सवाद हो । लेनिनले दर्शनको फाँटमा द्वन्द्ववादलाई विपरीतहरूको एकत्वको सिद्धान्तको रूपमा परिभाषित गरी त्यसमा द्वन्द्ववादको गुदी अभिव्यक्त भएको कुरा बताउनु भयो र द्वन्द्ववादका विविध पक्षबारे सटीक विवेचना गर्नुभयो । वहाँले प्रकृति विज्ञानको क्षेत्रमा इलेक्ट्रोनको खोज भएको अवस्थामा भौतिकवादको मूल आधारका रूपमा स्थापित परमाणुसम्बन्धी मान्यता खण्डित भयो भन्दै होहल्ला मच्चाइरहेकोमा त्यस खोजले यान्त्रिक भौतिकवादको खण्डन र द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको थप पुष्टि भएको वास्तविकतामाथि राम्रो प्रकाश पार्नुभयो ।
वहाँले आदर्शवादका साथै प्रत्यक्षवाद जस्ता मध्यवर्ती धाराका विभिन्न प्रवृत्तिको खण्डन गर्दै दार्शनिक पक्षधरतामा विशेष जोड दिनुभयो । साथै, वहाँले ज्ञानमीमांसाका क्षेत्रमा प्रतिबिम्बनको सिद्धान्तलाई विकसित तुल्याउनु भयो । लेनिनले राजनीतिक अर्थशास्त्रको क्षेत्रमा साम्राज्यवादको विशद विवेचना गर्नुभयो र त्यसलाई पुँजीवादको एकाधिकारी अवस्था बताउनु भयो । वहाँले वैज्ञानिक समाजवादको क्षेत्रमा समाजवाद तथा सर्वहारा क्रान्तिको युगमा कम्युनिस्ट पार्टीका रणनीति एवम् कार्यनीतिको विकास र सर्वहारा अधिनायकत्वको नयाँ स्वरूपका रूपमा सोभियत सत्ताको अवधारणा प्रस्तुत गर्नुभयो । लेनिनले रुसी धर्तीमा मार्क्सवादको सफल प्रयोग गर्नुभयो ।
माओवाद भनेको मार्क्सवाद–लेनिनवादको थप विकास हो । माओले दर्शनको क्षेत्रमा द्वन्द्ववादलाई अन्तरविरोधको सिद्धान्तको रूपमा विकसित तुल्याउनु भयो र विपरीतहरूको एकत्वको नियमलाई द्वन्द्ववादको आधारभूत नियम बताउँदै त्यसबारे विशद विवेचना गर्नुभयो । उहाँले पदार्थको चेतना र चेतनाको पदार्थमा रूपान्तरण सम्बन्धी ज्ञानको दुई छलाङको सिद्धान्त प्रतिपादन र सिद्धान्त तथा व्यवहारको एकता लगायतका विषयमा जोड दिंदै भौतिकवादलाई थप विकसित तुल्याउनु भयो । उहाँले राजनीतिक अर्थशास्त्रको क्षेत्रमा नोकरशाही पुँजीवादको मान्यता प्रतिपादन र समाजवादी अर्थतन्त्रका विविध पक्षबारे थप विकास गर्नुभयो । माओले वैज्ञानिक समाजवादको क्षेत्रमा नयाँ जनवाद, दीर्घकालीन जनयुद्ध, सर्वहारा अधिनायकत्वअन्तर्गत क्रान्तिको निरन्तरता, महान् सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति जस्ता सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नुभयो ।
मार्क्सवादको भ्रष्टीकरण र तोडमोड गर्ने चिन्तन तथा प्रवत्तिको नाम संशोधनवाद हो । दर्शनको फाँटमा संशोधनवादले द्वन्द्ववाद, भौतिकवाद र द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादको विरोध गर्दछ । यसले धार्मिक रहस्यवादलाई स्वीकार्दछ । यो वर्ग, वर्गसंघर्ष, बलप्रयोगको भूमिकाको विरोधी रहेको छ । राजनीतिक अर्थशास्त्रको क्षेत्रमा यसले पुँजीवादी संकटको सिद्धान्तलाई अस्वीकार गर्दछ । समाजवादको क्षेत्रमा यो सर्वहारा अधिनायकत्वको विरोधी र पुँजीवादी संसदीय लोकतन्त्रको पक्षमा रहेको छ ।
मार्क्स–एङ्गेल्सले अराजकतावाद र अवसरवादसित जुझ्दै मार्क्सवादको प्रतिपादन गर्नुभयो । वहाँहरूले ब्रिटेनमा अभिजातवर्गीय मजदुर पार्टी जन्मदै गरेको कुरा बताउनु भयो । लेनिनको समयमा साम्राज्यवादको उदयसितै संशोधनवाद पनि जन्मियो । संशोधनवाद विभिन्न रूप र रंगमा पेश हुँदै आएको छ । संशोधनवाद– मूलतः तीन रूपमा प्रकट भएको छ, ती हुन्– शास्त्रीय, आधुनिक र नव संशोधनवाद । शास्त्रीय संशोधनवाद मूलतः बर्नस्टाइन तथा काउट्स्की र आधुनिक संशोधनवाद ख्रुश्चोभ तथा टिटोद्वारा प्रवर्तन गरियो । नवसंशोधनवाद भनेको मार्क्सवादको नाममा मार्क्सवादमाथि नै आक्रमण र सिर्जनात्मक विकासको नाममा मार्क्सवादको सारतत्वमाथि नै हमला गर्नु हो ।
संशोधनवादकै निरन्तरतामा युरो, कम्युनिज्म जन्मियो…. यसै क्रममा नव मार्क्सवाद र उत्तर– मार्क्सवाद पनि पैदा
भए । संशोधनवाद मूलत दक्षिणपन्थी, मध्यपन्थी र ‘वाम’पन्थी अवसरवादका रूपमा प्रकट हुँदै आएको छ । रूपमा संशोधनवाद विविध प्रकारका छन्, परन्तु, सारमा संशोधनवाद पुँजीवादी विचारधाराकै अङ्ग हो ।
मार्क्सवाद र प्रतिक्रियावाद
मार्क्सवादको मूल उद्देश्य प्रतिक्रियावादका विरुद्ध जनवादी क्रान्तिलाई पूर्णता दिंदै वैज्ञानिक समाजवाद र साम्यवादको स्थापना गर्नु हो । मार्क्सवाद सबैखाले प्रतिक्रियावादी व्यवस्था तथा राज्यसत्ता र विचारधाराका विरुद्ध समेत परिलक्षित रहेको छ । साथै, मार्क्सवाद निम्न पँुजीवादी तथा संशोधनवादी विचारधाराको पनि विरोधी रहेको छ ।
प्रतिक्रियावाद दुई किसिमको हुन्छ– पुरानो र नयाँ । पुरानो प्रतिक्रियावाद अन्तर्गत सामन्तवाद, साम्राज्यवाद, विस्तारवाद, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवाद आउँछन् । नव प्रतिक्रियावाद संशोधनवादको पतन तथा उत्कर्षका रूपमा हुन्छ । सामाजिक साम्राज्यवाद नव प्रतिक्रियावादको एउटा रूप हो । जब संशोधनवाद प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता तथा व्यवस्था, अथवा भनौं दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति एवम् सामन्त वर्गको राज्यसत्ता र संसदीय व्यवस्थाको रक्षाकवच बन्न पुग्दछ र साम्राज्यवादको सेवामा समर्पित हुन्छ, त्यो बेला त्यसले नव प्रतिक्रियावादको रूप ग्रहण गर्दछ । पुरानो प्रतिक्रियावादलाई चिन्न त सजिलो हुन्छ, परन्तु नव प्रतिक्रियावादलाई चिन्न भने गाह«ो हुन्छ । किनभने त्यो मार्क्सवादको दोसल्ला ओढेर पेश हुने गर्दछ । क्रान्तिका लागि पुरानो प्रतिक्रियावाद मात्र होइन, नयाँ प्रतिक्रियावादलाई पनि राम्रोसित ठम्याउन र त्यसको विरोध गर्न जरुरी हुन्छ ।
विज्ञान तथा प्रविधि र मार्क्सवाद
उत्पादक शक्ति र उत्पादन सम्बन्धको विश्लेषण गर्ने क्रममा मार्क्सले के बताउनु भएको छ भने हाते मिलले सामन्ती समाज र वाष्प मिलले पुँजीवादी समाजलाई जन्म दिन्छ । मार्क्स–एङ्गेल्सद्वारा प्रतिपादित द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दर्शनको विकासमा प्रकृति विज्ञानको क्षेत्रमा भएको प्रगतिले उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरको थियो । त्यस सन्दर्भमा एङ्गेल्सले ऊर्जाको संरक्षण तथा रूपान्तरण, डार्विनको विकासवाद र कोसिकाको खोजजस्ता अनुसन्धानको महत्वमाथि विशेष प्रकाश पार्नुभएको छ । लेनिनले इलेक्ट्रोनको आविष्कारले द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको थप पुष्टि भएको कुरा बताउनु भयो ।
माओले ज्ञानको उत्पत्ति र विकासको निम्ति उत्पादनको लागि संघर्ष, वर्गसंघर्ष र वैज्ञानिक प्रयोगको विशेष महत्व हुने कुरा आंैल्याउनु भयो । प्रकृति विज्ञानको क्षेत्रमा भएको विकासलाई बङ्ग्याउने र त्यसैलाई द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको विरोधमा प्रयोग गर्ने काम पनि हुँदै आएको छ । परमाणुको खोजलाई आधार बनाई कैयौं दार्शनिकहरूले एकरूप (Universe) विश्वका विरुद्ध बहुरूप विश्व (Multiverse)को परिकल्पना गरे । क्वान्टम यान्त्रिकी र अनिश्चितताको सिद्धान्तलाई आधार बनाई कैयौंले बहुलवाद र अज्ञेयवादको पुष्टि गर्न थाले । परन्तु, आइस्टाइनको सापेक्षता तथा एकीकृत क्षेत्र जस्ता सिद्धान्तको विकास र स्टेफन हकिङ्गका पछिल्ला खोजले बहुलवाद, अज्ञेयवाद होइन, द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी अद्वैतवादको थप पुष्टि हुन गएको छ । लेनिनले प्रकृति विज्ञानको आधारविना द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद र द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको आधारविना प्रकृति विज्ञान सही दिशामा अगाडि बढ्न नसक्ने कुरामा जोड दिनु भएको छ ।
विज्ञान तथा प्रविधिको विकासलाई आधार बनाई प्रतिक्रियावादी तथा साम्राज्यवादीहरूले आफ्नो आयु लम्ब्याउने कसरत गरिरहेका छन् । त्यसैगरी कैयौं संशोधनवादीहरूले प्रकृति विज्ञानको गलत व्याख्या तथा विकृतीकरणका पछाडि लागेर माक्र्सवादका विरुद्ध आक्रोश व्यक्त गर्दै आएका छन् । विद्युतीय तथा प्राविधिक क्रान्तिको प्रक्रियामा नयाँ मेसिनहरूको विकासले मजदुरहरूलाई विस्थापित गरेको कुरा अगाडि सार्दै अब मानिस होइन, प्रविधि नै मुख्य बन्यो भन्दै अहिले तमाम संशोधनवादीहरू चिच्याउँदै छन् । हिजो संशोधनवादीहरूले मार्क्सको श्रममा आधारित मूल्य सिद्धान्तको विरोध गरेका थिए, अहिलेका नयाँ संशोधनवादीहरू पनि त्यसैको पुनरावृत्ति गर्न गइरहेका छन् । प्रविधिको जति विकास भए पनि अन्ततः त्यसले मानिसको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन, असली अर्थमा मानिसको भूमिका प्रमुख र प्रविधि गौण नै हुने कुरा स्पष्ट छ ।
क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिको प्रश्न
सोभियत रुस, पूर्वी युरोप, चीन लगायत क्रान्ति सम्पन्न भएका देशहरूमा प्रतिक्रान्ति किन भए ? अथवा भनौं समाजवादी राज्यसत्ता किन ढल्यो ? यी र यस्तै प्रश्नहरूको जवाफ प्रतिक्रियावादी, संशोधनवादी र मार्क्सवादी तीनवटै कोणबाट दिने गरिएको छ । प्रतिक्रियावादीहरूका दृष्टिमा समाजवादी सत्ताहरू ढल्नुमा अधिनायकवाद नै मूल कारण हो । प्रतिक्रियावादीहरूको यो तर्क पूरै गलत छ । किनभने सबैखाले राज्यसत्ता अधिनायकवादी हुन्छन् । र, प्रतिक्रियावादीहरूले नै अधिनायकवादको बढी अभ्यास गर्दै आएका छन् । संशोधनवादीहरूको दृष्टिमा जनवादको अभ्यास गर्न नसक्नुकै कारण रुसमा समाजवादी राज्यसत्ता ढलेको हो । यो तर्क पनि प्रतिक्रियावादी कोणसित नै मिल्ने गर्दछ । किनभने वर्गसमाजमा जनवादको स्वरूप वर्गीय नै हुन्छ र सबैका लागि जनवाद हुनै सक्दैन । यहाँ मूल प्रश्न कुन वर्गले कुन वर्गमाथि अधिनायकवाद लागु गर्ने र कुन वर्गले कसको हितमा जनवादको अभ्यास गर्ने भन्ने हो । उक्त प्रश्नहरूको जबाफ दिने काममा मार्क्सवादी कोण नै सही तथा वस्तुवादी रहिआएको छ । मार्क्सवादी दृष्टिकोण अनुसार प्रतिक्रान्ति हुनु वा समाजवादी सत्ता ढल्नुका पछाडि मूलतः दुईवटा कारण रहेका छन्, तीन हुन् ः वस्तुगत र आत्मगत कारण । यस प्रकारका वस्तुगत कारणहरू विभिन्न प्रकारका रहेका छन् ।
पहिलो, हारेको प्रतिक्रियावादी शक्ति वा पुँजीपति वर्गले आफ्नो पुरानो सत्ताको पुनः स्थापनाका लागि अत्यन्तै ठूलो कसरत गर्दछ । दोस्रो, समाजवादी समाजमा लामो समयसम्म लघु उत्पादन कायम रहेको हुन्छ र त्यसले पुँजीवादको पुनः स्थापनाका लागि आधार तथा स्रोतको काम गर्दछ । तेस्रो, बाह्य शक्ति अथवा भनौं साम्राज्यवादले समाजवादी समाज फाल्नका लागि सम्बन्धित देशभित्रका प्रतिक्रियावादीहरूलाई सहयोग पुर्याइरहेको हुन्छ । चौथो, सम्बन्धित देशको कम्युनिस्ट पार्टीभित्र बाह्य घुसपैठ हुने, त्यस कम्युनिस्ट पार्टीकै आन्तरिक पंक्तिमा संशोधनवाद जन्मिने र त्यस संशोधनवादले साम्राज्यवादसित गठबन्धन कायम गर्ने काम हुन्छन् । पाँचौं, क्रान्तिकारी र प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिहरूका बीचको संघर्षमा क्रान्तिकारीहरू कमजोर तथा प्रतिक्रान्तिकारीहरू प्रबल बन्न गई शक्ति सन्तुलनमा हेरफेर हुन सक्छ ।
साथै, यस सन्दर्भमा कैयौं आत्मगत कारणले पनि काम गरेका छन् । पहिलो त, समाजवादी समाजमा विद्यमान उत्पादक शक्ति र उत्पादन सम्बन्ध, आधार र उपरिसंरचना तथा दुई परस्पर विरोधी वर्गका बीच दीर्घकालीन अन्तरविरोधलाई सही ढंगले पहिचान तथा परिचालन गर्नेतर्फ आवश्यक नदिएर पनि स्थिति बिग्रन सक्छ । दोस्रो, उक्त अन्तरविरोधहरूको पहिचान गरेर मात्र हुँदैन, तिनको समाधान गर्ने दिशामा पनि उपयुक्त पाइला चाल्न नसकेर पनि दुर्घटना हुने गर्दछ । तेस्रो, क्रान्तिकारी शक्तिलाई राम्रोसित संगठित गर्ने र प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिलाई कमजोर पार्नेतर्फ ठोस तथा उपयुक्त कदम चाल्न नसक्नुले पनि त्यसो हुन पुग्दछ ।
प्रतिक्रान्तिका आधार र कारणबारे मार्क्स–एङ्गेल्सले केही संकेत गर्नुभएको थियो र सर्वहारावर्गको अधिनायकत्वको भूमिकामा जोड दिनु भएको थियो । लेनिनले रुसमा प्रतिक्रान्तिका सम्भावनाका विविध कारणबारे स्पष्ट भाषामा औल्याउनु भएको थियो । माओले मार्क्स–एङ्गेल्सका संकेत, लेनिनका निर्देशन र रुसमा स्टालिनकालमा भएका कमी कमजोरीहरू माथि विशेष ध्यान दिदै चीनमा सर्वहारा अधिनायकत्व अन्तर्गत क्रान्तिको निरन्तरताको सिद्धान्त प्रतिपादन गरी महान् सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति सञ्चालन गर्नुभएको थियो । परन्तु, अपेक्षित सफलता प्राप्त हुन सकेन । माओले लेनिनलाई दर्शाउँदै भन्नुभएको थियो । लेनिनवादी दृष्टिकोण अनुसार कुनै एक समाजवादी देशको आखिरी विजयका लागि के कुरा मात्रै जरुरी हुँदैन भने त्यस देशको सर्वहारा वर्ग र जनसमुदायले प्रयत्न गरून्, अपितु के कुराको पनि अपेक्षा हुन्छ भने विश्व क्रान्तिले पनि विजय प्राप्त गरोस्, पुरा पृथ्वीमाथि मानवद्वारा मानवको शोषण गर्ने व्यवस्थाको पनि ध्वंश होस्, जसबाट कि सारा मानव जाति मुक्त बनोस् । माओका यी भनाइ विशेष मननीय रहेका छन् ।
वर्तमान विश्व, क्रान्तिका चुनौती र मार्क्सवाद
वर्तमान विश्वका मूल विशेषता के हुन् ? क्रान्तिका लागि परिस्थिति कस्तो छ ? क्रान्तिको मार्गमा के कस्ता चुनौती र सम्भावना छन् ? यो बेला मार्क्सवादले के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ र गर्नु पर्दछ ? यी हाम्रो गम्भीर चासो र विशेष महत्वका प्रश्न हुन् । आजको युग साम्राज्यवाद र सर्वहारा क्रान्तिकै युग हो । आज विश्वमा तीन प्रकारका आधारभूत अन्तर्विरोधहरू छन्, ती हुन्– पुँजीपति वर्ग तथा सर्वहारा वर्गका बीचको अन्तर्विरोध, साम्राज्यवादी शक्तिहरू बीचको आपसी अन्तर्विरोध र साम्राज्यवाद तथा उत्पीडित राष्ट्रहरूका बीचको अन्तर्विरोध । यी अन्तर्विरोधहरूमा अहिले पनि तेस्रो तहको अन्तर्विरोध नै प्रधान अन्तर्विरोध रहिआएको छ र अहिले पनि क्रान्ति नै विश्वको मूल प्रवृत्ति हो । परन्तु, विशेषमननीय कुरा के छ भने क्रान्तिलाई सही दिशामा अगाडि बढाउनका लागि विश्व सर्वहारावर्गकै आत्मगत अवस्था यो बेला निकै कमजोर रहेको छ ।
अहिले विश्वमा भूमण्डलीकृत साम्राज्यवाद र नवउदारवादको प्रभुत्व चरम उत्कर्षमा पुगेको छ । एकाधिकारी वित्तीय पुँजी र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको हैकम तीब्र रूपमा बढ्दै गएको छ । राजनीति, अर्थतन्त्र, संस्कृति, युद्धकला, विज्ञान, प्रविधि, सूचना–सञ्चार– सबै क्षेत्रमा भूमण्डलीकृत साम्राज्यवादले कब्जा जमाएको छ । यो क्रान्तिका लागि निकै प्रतिकूलता हो । परन्तु, केही समय यता परिस्थिति विस्तारै फेरिदै छ । नवउदारवादी अर्थतन्त्र र संसदीय लोकतन्त्र आर्थिक तथा राजनीतिक दुवै दृष्टिले भयावह संकटको भुमरीमा फस्तै गइरहेका छन् र संरक्षणवाद फासिवादतर्फ उद्दत छ । नवउदारवाद र संरक्षणवाद दुवै भूमण्डलीकृत साम्राज्यवादका भिन्न पाटा हुन् र ती दुवैसित साम्राज्यवादी संकटको दीर्घकालीन समाधान तथा सामना गर्न सक्ने सामर्थ्य छैन । यो क्रान्तिका लागि अनुकूलता हो ।
परन्तु, यति हुँदाहुँदै पनि आज क्रान्तिका सामु गम्भीर चुनौती खडा भएका छन् । ती चुनौतीहरूलाई दुई भागमा वर्गीकृत गर्न सकिन्छ, ती हुन्– भौतिक चुनौती र वैचारिक चुनौती । अहिलेको भौतिक चुनौती भनेको साम्राज्यवाद समस्त सम्पदा र शक्तिका स्रोत तथा साधनहरूलाई आफ्नो कब्जामा लिन र केन्द्रीकरण गर्न समर्थ हुनु हो । त्यत्ति मात्र होइन, पुराना प्रतिक्रियावादी तथा साम्राज्यवादी शक्तिहरू जनमानसमा नाङ्गिदै गएको स्थितिमा नयाँ साम्राज्यवादी तथा प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू पुरानोको बिंडो थाम्न लामबद्ध हुन पुगेका छन् । यो काम आज नामधारी कम्युनिस्ट तथा कथित वाम शक्तिबाट भइरहेको छ । आज प्रतिक्रियावादीहरूले वैचारिक क्षेत्रमा गम्भीर चुनौतीहरू तेर्स्याइरहेका छन् । यो काम उनीहरूले मार्क्सवाद असफल भयो भन्ने होहल्ला मच्चाएर, मार्क्सवादले प्रस्तुत गर्दै आएको वर्ग तथा वर्गसंघर्षका विरुद्ध जाति, जात, लिङ्ग, नस्ल र उत्तर मार्क्सवाद तथा पहिचानको मान्यता पेश गरेर र नयाँ तथा पुराना सबैखाले संशोधनवाद, नवमार्क्सवाद, उत्तर–आधुनिकतावादका बीच मार्क्सवादविरोधी मोर्चा बनाएर पुरा गरिरहेका छन् । यी सबै क्रान्तिका लागि गम्भीर प्रतिकूलता हुन् ।
परन्तु, मार्क्सवादले परिस्थितिको नकारात्मक मात्र होइन, सकारात्मक पाटोलाई पनि हेर्न सिकाउँछ । मार्क्सवादले हामीलाई प्रतिकूलता र अनुकूलता, चुनौती र सम्भावना तथा प्रतिक्रान्ति र क्रान्तिका बीचको द्वन्द्वात्मक सम्बन्धलाई पनि अध्ययन गर्न सिकाउँछ । मार्क्सवादी द्वन्द्ववाद आलोचनात्मक र क्रान्तिकारी दुवै रहेको छ । माओले साम्राज्यवाद र तमाम प्रतिक्रियावादीहरूको दोहोरो स्वरूपमाथि भौतिकवादी द्वन्द्ववादका आधारमा प्रकाश पार्दै भन्नुभएको थियो– साम्राज्यवाद र सबै प्रतिक्रियावादीहरूलाई सारतत्वको दृष्टिले, दीर्घकालीन दृष्टिले, रणनीतिका दृष्टिले तिनको वास्तविक स्थितिका आधारमा कागजी बाघका रूपमा नै हेर्नु पर्दछ । यसै आधारमा हामीले रणनीतिसम्बन्धी विचारहरूको निर्माण गर्नु पर्दछ । अर्कोतिर ती जिउँदा बाघ पनि हुन्, फलामका बाघ पनि, साँचा बाघ पनि हुन्, जसले मानिसलाई खान सक्तछन् ।
यसै आधारमा हामीले आफ्ना कार्यनीति र युद्धकलासम्बन्धी विचारहरूको निर्माण गुर्न पर्दछ । माओका यी भनाइहरू विशेष मननीय रहेका छन् । वर्तमान साम्राज्यवाद र सर्वहारा क्रान्तिको युगमा प्रतिक्रान्तिका निर्धारक साम्राज्यवादी र क्रान्तिका निर्धारक शक्ति सर्वहारावर्ग हुन् । आज बाह्य रूप र तात्कालिक दृष्टिले साम्राज्यवाद बलियो र सर्वहारावर्ग कमजोर अवस्थामा छन् । परन्तु, यो क्षणिक कुरा हो । सारतत्व र दीर्घकालीन दृष्टिले साम्राज्यवाद कमजोर र सर्वहारावर्ग बलवान रहेका छन् । यो भौतिकवादी द्वन्द्ववादमा आधारित मार्क्सवादी भविष्य दृष्टि हो । यस सच्चाइलाई हामीले राम्रोसित आत्मसात् गर्नुपर्दछ ।
क्रान्तिका सामु उपस्थित चुनौतीहरूको सामना गर्नका लागि हामीले मार्क्सका शिक्षाहरूलाई, मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवादलाई दह्रोसित पकड्नु पर्दछ । यस सन्दर्भमा ध्यान दिनुपर्ने केही मूल विषय यी हुन् :
पहिलो, मार्क्सवाद संघर्षको सिद्धान्त हो । हाम्रा सामु प्रतिक्रियावाद तथा संशोधनवादद्वारा जुन भौतिक तथा वैचारिक चुनौतीहरू खडा गरिएका छन्, तिनको सामना संघर्षकै बीचबाट गर्नुपर्दछ । हामी संघर्षका बीचबाट सिक्तै र समृद्ध बन्दै अगाडि बढ्नु पर्दछ । दोस्रो, क्रान्तिका लागि क्रान्तिकारी संगठनलाई विकसित तुल्याउनु पर्दछ । सर्वहारा वर्गको राजनीतिक संगठनका रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई क्रान्ति गर्न योग्य बनाउनु पर्दछ । कम्युनिस्ट अन्तर्राष्ट्रियको निर्माणका लागि आज विशेष पहल गर्न आवश्यक छ । तेस्रो, क्रान्तिका लागि संयुक्त मोर्चाको पनि आवश्यकता पर्दछ । आज क्रान्तिकारीहरूले विश्व तथा क्षेत्रीय दुवै स्तरमा साम्राज्यवाद तथा प्रतिक्रियावादका विरुद्ध संयुक्त मोर्चाको निर्माण गर्नु पर्दछ ।
चौथो, क्रान्तिका लागि पैदा हुँदै आएका नयाँ समस्याहरूको सामना गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय क्षेत्रमा हुँदै आएको विकास प्रक्रियालाई ठम्याउन र तदनुरूप रणनीति तथा कार्यनीति निर्माण गर्न विचारको क्षेत्रमा विकास गर्दै जानु पर्दछ ।
मार्क्सवादको भविष्य समुज्ज्वल छ । किनकि त्यो विश्व सर्वहारा वर्ग र उत्पीडित जनसमुदायको मुक्तिसित जोडिएको छ । आज सर्वहारा वर्ग मात्र होइन, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिमसहितका जनसमुदाय पनि सामन्तवाद, साम्राज्यवाद र विभिन्न खाले प्रतिक्रियावादको उत्पीडनको शिकार हँुदै आएका छन् । सर्वहारावर्गले उत्पीडित जात, नस्ल, जाति, लिङ्ग आदि जनसमुदायको पहिचानको सम्मान गर्नु पर्दछ र उत्पीडित जनसमुदायले पनि सर्वहारा वर्गको वर्गीय पहिचानको पक्षमा बोल्नु पर्दछ । सर्वहारावर्ग र उत्पीडित जनसमुदाय बीच बलियो एकता कायम हुनु पर्दछ । आखिर, वर्ग समाजमा सबै उत्पीडन आफ्नो सारतत्वमा वर्गीय उत्पीडनकै अभिव्यक्ति हुन् । सर्वहारावर्ग र उत्पीडित जनसमुदायको मुक्तिका लागि मार्क्सवादले नै पथप्रदर्शन गर्दछ ।
वर्तमान विश्वमा संकटग्रस्त तथा बर्बर साम्राज्यवादको विकल्प मार्क्सवाद मात्रले प्रस्तुत गर्न सक्तछ र त्यो विकल्प भनेको वैज्ञानिक समाजवाद हुँदै साम्यवादमा जानु हो । साम्यवाद वस्तुतः नयाँ मानवतावाद हो । मार्क्सवाद सर्वहारावर्ग र उत्पीडित जनसमुदायको मुक्तिको सिद्धान्तका साथै क्रान्तिको विज्ञान पनि हो । विज्ञान समृद्ध हुन सक्तछ, थप विकसित हुँदै जान सक्तछ, परन्तु असफल हुन सक्तैन । द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको पुष्टि प्रकृति विज्ञानद्वारा हुँदै आएको छ । मार्क्सवाद स्थिर रहन सक्तैन, यो गतिशील विज्ञान हो र यसले प्रयोगको माग गर्दछ । यसको विकास प्रयोगका बीचबाटै हुने गर्दछ ।